‘माया कहिल्यै पुरानो हुन्छ र ?' : किरण केसी [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं–यसवर्षकै प्रतिक्षित चलचित्र हो– दाल भात तरकारी ।
मह सञ्चार अर्थात् मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको चलचित्र भएकाले पनि फिल्म प्रतिक्षित बनेको हो ।
किरण केसी ‘राता मकै’ चलचित्रका निर्माता हुन् । महजोडी र किरणको टीमप्रति दर्शकको ठूलो विश्वास छ । यो टीमले निर्माण गरेको ‘शत्रु गते’ गतवर्षको सुपरहिट चलचित्र हो ।
टीम बाहेक मल्टिस्टारर कलाकारको अभिनय, सार्वजनिक ट्रेलर र गीतसंगीतका कारण पनि चलचित्र प्रतिक्षित छ । तर अब त्यो प्रतिक्षा क्रमश: सकिँदै छ । सिनेमाघरमा भोलि शुक्रवारबाट चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ लाग्दैछ ।
चलचित्र प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा निर्माता किरण केसी (रातामकै)सँग लोकान्तरले छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ।
चलचित्र प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । कस्तो लागिरहेको छ ?
अन्य समयभन्दा चलचित्र प्रदर्शनको समयमा धेरै तनाव हुँदो रहेछ । आजसम्म एकदमै दौडधुपमा थिएँ । प्राविधिक काम, प्रचारप्रसारको कामले फुर्सद मिलेको थिएन । त्यो काम अब सकिएको छ । आजसम्म हाम्रो चलचित्र भोलिबाट दर्शकसामु पुग्दैछ । तर दर्शकलाई निराश नबनाउने चलचित्र बनाएका छौं । त्यसैले चलचित्रलाई लिएर म आशावादी र उत्साहित छु ।
‘दात भात तरकारी’ कस्तो खालको चलचित्र हो ?
यो पूर्ण पारिवारिक चलचित्र हो । त्यसभित्र चलचित्रमा हुनुपर्ने हरेक मसलाहरू समेटिएको छ । चलचित्रका गीतसंगीत दर्शकले रुचाउनुभएको छ । त्यस्तै चलचित्रभित्र हाँसोको फोहोरा छ । त्यस्तै कथावस्तु उत्तिकै राम्रो छ । म चलचित्रलाई नेपालीको घरघरको कथा, व्यथा भन्छु ।
दर्शकबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ? के भन्नुहुन्छ दर्शकहरू ?
सबैतिरबाट एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौं । दर्शकहरू चलचित्र हेर्न निकै आतुर देखिनुहुन्छ ।
मह जोडीको चलचित्रमा दर्शकको अपेक्षा र विश्वास हुन्छ । ‘दात भात तरकारी’लाई दर्शकले माया गर्नुहुने विश्वास लिएको छु ।
‘भिजिट भिषामा’बोलको गीत आइसकेपछि चलचित्रलाई लिएर केही नकारात्मक टिप्पणीहरू भएका थिए, चलचित्रले विदेश मोह दर्सायो भन्ने खालको । जुनपछि सार्वजनिक ट्रेलरमा पनि झल्किएको छ । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
गीतलाई लिएर आँकलन गर्न मिल्दैन । चलचित्रभित्र हाम्रो कथा विल्कुलै फरक छ । म भन्छु, नकारात्मक टिप्पणी गर्नेले चलचित्रबाटै जवाफ पाउनुहुनेछ । चलचित्र हेरिसकेपछि प्रष्ट हुनुहुनेछ ।
अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारी र विदेश अझ भनौं अमेरिका मोहको कथा यसअघि अन्य चलचित्रले पनि उठाएका थिए । यो कथा अलि पुरानो भएन र ?
तपाईलाई सोध्छु, माया कहिल्यै पुरानो हुन्छ ? नेपाल कहिल्यै पुरानो हुन्छ ?
देशको जल्दोबल्दो समस्या नै वैदेशिक रोजगारी, विदेश मोह हो ।
जसरी माया पुरानो हुँदैन, देश नेपाल पुरानो हुँदैन । यो समस्याका कथा पनि कहिल्यै पुरानो हुँदैन । मात्र प्रस्तुतीकरण फरक हुनुपर्छ । कथालाई हामीले भिन्न र रोचक ढंगले प्रस्तुत गरेका छौं ।
चलचित्रले कस्तो सन्देश दिन्छ ?
निःसन्देह मह सञ्चारले बनाएको चलचित्रले पोजेटिभ सन्देश दिन्छ ।
देशमै रोजगारी सिर्जना गरौं । मानिसले जहाँ गएपनि दात भात तरकारी खानका लागि संघर्ष गर्ने हो । विदेशमा गएर त्यो संघर्ष गर्नुभन्दा स्वदेशमै, स्वदेशको माटोमै बसौं भन्ने खालको सन्देश दिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विदेश मोह कम हुन नसक्नुको कारण के होला ?
मुख्य कारण नै सरकारले रोजगारीको सिर्जना गर्न नसक्नु हो ।
अर्को विदेश जाने चलिआएको परम्परा जस्तो भयो । आफन्त, साथीभाई विदेश गएपछि जोकोही विदेशप्रति आकर्षित बनिरहेको हुन्छ ।
तपाईंलाई चाहिँ कहिल्यै विदेश मोह जागेन ?
म ८ पटक अमेरिका गएँ । मोह भएको भए उत्तै बस्थेँ होला । विश्वका ४२ वटा देश घुम्दा कहिल्यै त्यहाँ बस्न मन जागेन । बाहिर हुँदा जहिले पनि आफ्नै देशलाई सम्झिरहेको हुन्थेँ । मलाई आजसम्म कहिल्यै विदेश जाउँ, उतै बसुँ भन्ने लागेको छैन ।
अन्त्यमा यस चलचित्रबाट तपाईंको छोरा सुदन केसीले निर्देशनमा डेब्यू गर्नुभएको छ । एउटा बाबु भएर भन्दा पनि एउटा निर्माता भएर भन्दा उहाँको काम कस्तो रह्यो ?
मह सञ्चारले छोरा सुदनलाई डेब्यू गराउनुभयो । त्यस्तो गरिमा संस्थाले निर्देशकको जिम्मेवारी दिनु भनेको क्षमता र दक्षता देखेरै हो । छोरामा स्क्रिप्टको राम्रो ज्ञान छ । त्यस्तै टेक्निकलका कुरामा पनि राम्रो दक्षता राख्छ । पहिलो चलचित्रमा उसले धेरै राम्रो काम गरेको छ । म मात्र होइन हामी सबै उसको कामबाट एकदमै खुशी छौं । दर्शकहरु पनि उसको कामबाट खुशी हुनुहुनेछ ।